DALABAADKA DABACASAHA EE RUSSIA AYAA SII KORDHAYA OO LA SOCOTA QIIMAHA - MAQAALLO
Dalabaadka dabacasaha ee Russia ayaa sii kordhaya oo la socota qiimaha
Kuwa wax soo saarka dabiiciga ah ee Ruushka ayaa sii wadi doona sicirka, sida ay sheegeen falanqeeyayaasha EastFruit. Sida sharaxaad ka bixiyay soo saarayaasha, sababta ugu weyn ee kororka sicirka dabiiciga ah tayo sare leh waa dalab aan caadi ahayn ee macaamiisha.
Karootada maxaliga ah ee beerashada tayo sare leh bartamihii isbuuca ayaa laga iibsan karaa qiimo ah 15-25 roon / kg ($ 0.23-0.38 / kg). Tani waa 25% ka qaalisan maalmaha ugu dambeeya ee usbuucii ugu dambeysey ee shaqada.
Ruushku wuxuu awoodi doonaa inuu dadka siinayo ukunta cusub iyo basbaaska cusub sanadka oo dhan
Dhoofinta wax soo saarka beeraha ee Ruushka ayaa kordhi doona deynta
Waa maxay juice macaan karo ee jirka bini'aadamka?
Marka la eego soosaarayaasha Ruushka, karootiga tayada tayada wanaagsan ee suuqyada dalka ayaa wali hoos u dhacaya, taas oo ay sababtay dhamaadka xilliga iibka iyo hoos u dhigga kaydka alaabta ee goobaha kaydka beeraha. Xaaladdan oo kale, baahida loo qabo dabacasaha ma aha oo kaliya maaha oo kaliya, laakiin waxay sii kordhaysaa badanaa, taas oo kicinaysa hawlwadeenada suuqa si loo kordhiyo qiimaha tayada.
Waxaa xusuus mudan in qiimaha hadda ee karootiga tayo sare leh ayaa la sameeyay isla halbeeggii sannadkii hore. Isla mar ahaantaana, badi shirkadleydu waxay kalsooni ku qabaan sii kordhinta qiimaha badeecadaha. Waxaa la aaminsan yahay in mahadnaqu uu sii kordhi doono hoos u dhaca kaydka karootada ee dukaamada cuntada. Waxay sharaxayaan dhaqdhaqaaqa qiimaha leh iyadoo xaqiiqda ah in aysan jirin wax tartan ah oo la xiriira alaab dibedda ah.
Adeegga Macmiilka ee Ukraaniyaanka ayaa burburiyay qiyaastii tintood khudradeed oo ay saameysay nitrates
Saynisyahanada Shiinaha ayaa bilaabay beeraha ugu weyn ee khudaarta soo koraya oo aan lahayn carrada
Waa maxay dabacasaha karootiga ee faa'iido leh: ka kooban kiimikada iyo isticmaalka